गाडीमा यात्रा गरिरहेका बेला संसार छोडेकी आमाको घर पुग्दा – Jagaran Nepal
गाडीमा यात्रा गरिरहेका बेला संसार छोडेकी आमाको घर पुग्दा
Jagaran Nepal शुक्रबार, भाद्र ११, २०७८
पश्चिम रुकुम – पश्चिम रुकुमको बेसिकोट नगरपालिका ८ पटला गाउँकि धर्म कुमारी पटेलाको मृ,त्यु गाडीमा सवार गर्ने क्रममा बसको सीटमै भएको थियो। काखमा सानो छोरालाई दूध खुवाउँदा खुवाउँदै गर्दा उनको मृ,त्यु भएको थियो। अहिले यी नै महिलाको घरमा गएर जिटीभी नेपालले आफ्नो भिडियो रिपोर्टिङ गरेको छ। उनै बालक हुन् जो गाडीमा यात्रा गर्ने क्रममा आमाको मृ,त्यु भैसकेपछी पनि मस्त निदाइरहेका थिए।
उनलाई अहिले आमा नभएपछि फुल्याउन निकै गाह्रो भैरहेको छ।उनी दिनरात आमा खोज्दै रुने, चि’च्याउने गरिरहेका छन्। उनका अर्का छोरा १३ वर्षका भए। उनले त्यसदिन आफ्नी आमाको मृ,त्युपश्चात उनको ठूलिममीले भनेपछि मात्रै थाहा पाएका थिए। आफू सामान्य बिरामी भएको खबर कामले नेपालगन्ज गएका श्रीमानलाई पुर्‍याउछिन ! श्रीमानले गाउँको मेडिकलमा उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छन् !
निको नहुँदा आफू यतै छु काखको बच्चा मात्र ल्याएर आउ यतै उपचार गरेर जाँउला भनी नेपालगन्ज बोलाउछन उनका श्रीमानले ! अब बाँच्ने आशा सहित उनी घरको सबै चाँजो पाँजो मिलाई एक दुधे बालक काखमा च्या’पेर नाइट बस चड्छिन उनी ! गाडीमा चिनेको मान्छे कोहि नहुँदा काखको बालकलाई नै आफ्नो रात्रिकालिन यात्राको साथी अनि बिरामी अबस्थाको साहारा सम्झदै यात्रा गरिरहेकी हुन्छिन !
बिच बाटामा उनिलाइ उ’ल्टि हुन्छ ! वरपरका सबै सिटका मान्छेहरु मस्त निद्रामा हुन्छन् ! उनी आत्तिन्छिन र काखको बच्चालाई ओल्टाइ पल्टाई बिउझाउने कोसिस गर्दा पनि उ बिउझिदैन! उनलाई उकुसमुकुस हुन्छ र सोच्छिन कि बाटामा मलाई केही भैहाल्यो भने यो काखको छोरा.. ??? फेरि बच्चालाई उठाउने कोशिश गर्दा गर्दै उनलाई अन्तिम अबस्थाले च्या’प्दै जान्छ र अ’म्तिममा सधैका लागि नि’दाउछिन !
बच्चा रु’न थाल्छ र आसपासका सिटका मान्छेहरु बिउझेर उनलाई उठाउन खोज्दा उनी सधैको लागि निदाइसकेकी हुन्छिन !सबैले बच्चा नराम्रोसँग चि’च्याए को देखेर उनलाई बोलाउन खोज्छन्, बोलाउँ छन् तर उनी निदाइरहेकी हुन्छिन् । नजिकै गएर बोलाउँदा समेत नबोलेपछी मानिसहरू जान्छन् तर उनी कहिले नब्युँझिने गरि ची’र निद्रामा पुगिसकेकी हुन्छिन्